Ciidamada Qaranka Somaliland ee fadhiisinkoodu yahay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa dhirbaaxo kulul ku dhuftay ciidamado ilaalo u ahaa wasiirka Qorshaynta xukuumadda Farmaajo oo shalay socdaal ku yimi magaalada Badhan ee gobolka Sanaag isla markaana uu dhalasho ahaan kasoo jeedo.
Ciidamada Qaranka Somaliland oo hadh iyo habeen heegan ugu jira ilaalinta xuduudaha Qaranka Somaliland ayaa markii wasiirkan Qorshaynta Farmaajo soo gaadhay Badhan ay damceen inay xog kaga saaraan magaalada,waxaana sida xoguhu tibaaxeen uu is rasaasayn dhex maray ciidamada Qaranka Somaliland ee halkaasi fadhiisinka ku leh iyo ciidamo uu watay wasiirka socdaalka ku yimi Badhan.
Waxaana is rasaasayntan oo socotay saacado ciidamada Qaranka Somaliland kaga dhaawacmay hal askari,halka ciidamadii uu watay wasiirka Qorshaynta Somaliyana ay kaga dhaawacmeen laba askari.
Waxaana ciidammada Qarranka Somaliland la sheegay inay wacad ku mareen inay gacanta ku dhigayaa wasiirkan ka socda Somaliya ee soo gaadhay Badhan hadii aanu si dhakhso ah uga baxin,taasina waxay sababtay in wasiirkaasi uu saaka deg deg kaga baxo magaalada Badhan uuna ku noqdo magaalada Muqdisho.
Waa markii ugu horeysay ee wasiir ka socda dawlada Somaliya uu soo gaadho deegaano ka tirsan gobolada bariga Somaliland.